डा. केसीको स्वास्थ्य एकदमै जोखिममा, नाइटभिजनमा राति नै काठमाडौैं ल्याउने तयारी – Health Post Nepal
डा. केसीको स्वास्थ्य एकदमै जोखिममा, नाइटभिजनमा राति नै काठमाडौैं ल्याउने तयारी
धरानबाट गएका विशेषज्ञ टोलीका संयोजक डा. डा. विकास साहका अनुसार इलामबाट तीन विशेषज्ञसहितको एम्बुलेन्स भद्रपुरका लागि १०.२० मिनेटमा हिडेको छ । आर्मीको हेलिकप्टर पनि भद्रपुरमा ल्यान्ड भइसकेको छ । आर्मीको हेलिकप्टरमा धरानका २ विशेषज्ञसहित काठमाडौं ल्याइने र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिनेछ ।
नौ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुटुको चाल निरन्तर अनियमित भइरहेपछि राति नै काठमाडौं ल्याउने तयारी भएको छ । साँझ अचानक मुटुको चाल घटेपछि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसमेत निकै आत्तिएका थिए । धरानबाट गएका विशेषज्ञले पनि कुनै पनि शर्तमा ढिला गर्न नहुने सुझाब दिएर तत्कालै आइसियू भएको ठाउँमा रिफर गर्न लागिएको मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. बृजेन्द्र साहले हेल्थपोस्टलाई जानकारी दिए । साँझ अचानक मुटुको चालमा ठूलो समस्या देखिएपछि विशेषज्ञ कुनै पनि अवस्थामा ढिला गर्न नहुने सुझाब दिएकोले तत्कालै आइसियू भएको ठाउँमा रिफर गर्न लागिएको मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. बृजेन्द्र साहले हेल्थपोस्टलाई जानकारी दिए ।
अप्रिय अवस्था आउन नदिन चिकित्सकको सुझाबअनुसार नै काठमाडौं लैजाने तयारी भएको इलाममै रहेका चिकित्सक डा. अभिशेक सिंहले जानकारी दिए । इलाममा हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्न सक्ने अवस्था नभएका कारण भद्रपुरसम्म एम्बुलेन्समा लगेर राति नै काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँगै सम्पर्क स्थापित भएर काठमाडौं ल्याउने लागिएको बुझिएको छ । यसअघि विहीबारै पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की, पूर्व सभामुख दमनाथ ढुंगाना, त्रिवि पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमासहितको टोली इलाम गएको थियो । टोलीलाई चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य अवस्था कति खराब छ भन्ने जानकारी दिएका थिए । ऐक्यवद्धता जनाउन पुगेका नागरिक अगुवासमेत चिकित्सकबाट स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिएपछि निकै गम्भीर बनेका थिए ।
पटकपटक समस्या देखिएपनि यसअघि उपचाररत चिकित्सकले मुटुको औषधि चलाउन सुझाब दिँदा पनि डा. केसीले अस्वीकार गरेका डा. साहको भनाई छ । साहका अनुसार मुटुमा थप समस्या आएमा चिकित्सकीय प्रयासले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । डा. केसी मुटुको पहिलेदेखि नै बिरामी भएको तर अनशनका कारण औषधि छुटेकाले खतरा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
‘दुईजना पारामेडिक्स नियमित डा. केसीको मुटुको चाल मोनिटरिङमा खटिएको छ । डा. केसी २ दिनदेखि निकै कम र बिस्तारै मात्र बोल्नुहुन्छ,’ मेसु साहले भने ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा इलाममा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्योपचारका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबाट ६ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बिहीबार पनि इलाम पुगेको छ । ‘बिहानदेखि डा. केसीको स्वास्थ्यजाँच गरिएको छैन । डा. केसी जुनकुनैवेला जाँच गर्न मान्नुहुन्न, त्यसैले हामी स्थानीय चिकत्सकले आवश्यक ठानेमा मात्र जान्छौँ,’ डा. विशेषज्ञ टोलीको नेतृत्वकर्ता डा. विकास साहले भने ।
प्रतिष्ठानका अस्पताल सहायकनिर्देशक डा. विकास साहको नेतृत्वमा डा. आशिष सुवेदी, एनेस्थेसिया र आइसियू, डा. अदिति महासेठ, कार्डियोलोजिस्ट, डा. राजकुमार गजमेर, इमर्जेन्सी फिजिसियन, केशव नेपाल, ल्याब टेक्निसियन, देवकान्त चौधरी, नर्स, लगायतको टोली बिहीबार साँझ इलाम पुगेको हो ।
बुधबार गएको टोलीले पहिलो चरणको स्वास्थ्यपरीक्षण गरी फर्केको र आजको टोली भने आवश्यकताअनुसार इलाममै रहने डा. साहले जानकारी दिए ।
सहमति पालना गर्दै जीवनरक्षा गर्न बुटवलमा ज्ञापनपत्र
डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमति पालना गर्न माग गर्दै मानवअधिकार तथा शान्तिसमाज रुपन्देहीले इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन र डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गरिएको छ ।
‘सत्याग्रही डा. केसीसँग विगतमा भएका सहमतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गरी डा. केसीले थाल्नुभएको सत्याग्रहलाई उचित निकास दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गर्दछौँ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा शान्तिसमाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले वर्तमान सरकारले सत्याग्रही डा. केसीलाई मार्न चाहेको आरोप लगाए । उनले सरकार सबैको अभिभावक बन्न नसक्दा केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य नाजुक बन्दै गएको हुँदा जीवन बचाउनका लागि सबैले दबाब दिनुपर्ने उनले बताए । पूर्वसहमति पालना नगर्ने सरकारले डा. केसीलाई पुनः अनशनमा बस्न बाध्य पारेको उनको भनाइ थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका शाखाअधिकृत विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले ज्ञापनपत्र यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने बताए ।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष निरु गौतमले सरकारले केसीसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । समाजका रुपन्देही सभापति डिपी खनालले सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनता देखाउँदा आमजनमानसमा वितृष्णा उत्पन्न भएको बताए ।